नेकपामा त्रिपक्षीय भीडन्त, सभामुख चयनमा कसको होला पल्ला भारी ? – नेपाली प्रोफईंल
१७ जेष्ठ २०७७, शनिवार Saturday, 30 May, 2020
नेकपामा त्रिपक्षीय भीडन्त, सभामुख चयनमा कसको होला पल्ला भारी ?
२८ पुष २०७६
काठमाडौं– नयाँ सभामुख चयनको विषय थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनस्टि पार्टी(नेकपा) को सचिवालय बैठकले उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउने निर्णय गरेको भएपनि उनले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी छिन् ।
आइतवार(हिजो) संसद बैठक राख्ने तयारी गरेपछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई बोलाएर राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए ।
‘राजीनामा दिएर सभामुखका लागि सहज बनाइदिनु पर्‍यो’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले आग्रह गरेको भएपनि उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गरेको बालुवाटार निकट स्रोतको भनाइ छ ।
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे तत्कालीन नेकपा एमालेकी समानुपातिक सांसद हुन् । एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावी गठवन्धन गरेपछि एमालेको भागमा परेको उपसभामुखमा उनलाई पार्टीले उम्मेदवार बनाएको थियो ।
संविधानमा सभामुख र उपसभामुख दुई फरक दलको हुनुपर्ने र दुई मध्ये एकमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रकरण तानिएपछि अहिले सभामुखको पद खाली रहेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपाले सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक पदमात्र अब आफूले राख्न पाउने छ । त्यसका लागि उसले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराएर सभामुख राख्न खोजेको छ ।
तर उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भने पदबाट राजीनामा दिन अस्वीकार गरेकी छिन् । उनले आफूमा पनि सभामुख बन्ने योग्यता भएको बताउँदै आएकी छिन् ।
खबरहबसँगको कुराकानीमा उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले आफूलाई राजीनामा गर भनेर आदेश दिने अधिकार नेकपासँग नरहेको तर्क गरेकी छिन् । उनले आफूलाई नेकपाले राजीनामा गर्न गरेको आग्रहको औपचारिक पत्रसमेत नआएको बताइन् ।‘
निर्देशन जारी गरेको हो भने त्यो मान्य हुन्न । एउटा संस्थाको प्रमुख पदमा बसेको व्यक्तिलाई निर्देशन जारी गर्न मिल्दैन’ उनले भनिन्,‘संस्थाको नेतृत्व तहमा बसेको व्यक्तिलाई कुनै एउटा दलले निर्देशन जारी गर्न सक्दैन, मिल्दैन । तर उसले आग्रह गर्नसक्छ । के शब्द प्रयोग गरेको छ पत्रमा मलाई प्राप्त भएको छैन ।’
उनले सभामुखमा आफ्नो दाबी रहेको बताइन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएसँगै आफ्नो स्वभाविक दाबी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘सभामुखको दाबी त जुन दिन पूर्वसभामुख महराजीको राजीनामा स्वीकृत गरेर सार्वजनिक गरेका थिए, त्यही दिन मैले सार्वजनिक गरेको मेरो दाबी अहिले पनि कायम छ’ उनले भनिन् ।
उनले सभामुखका लागि आफू योग्य भएको भन्दै नेकपाका दुई अध्यक्षलाई सूची नै बुझाएकी थिइन् । आफूलाई राजीनामा गराउनु पर्नाको कारण र नयाँ सभामुखको नामबारे जानकारी पाएपछि मात्र विचार गर्न सकिने निर्णय आइतवार बालुवाटार पुगेर उनले अध्यक्षद्वयलाई सुनाएको स्रोतको दाबी छ ।
नेकपामा त्रिपक्षीय भीडन्त ?
सभामुख प्रकरणमा नेकपामा त्रिपक्षीय भीडन्त देखिएको स्वयं नेकपाका नेताहरुनै स्वीकार गर्छन् ।
नेकपाका एक जना सचिवालय सदस्यले त्रिपक्षीय भीडन्तका कारण समस्या देखिएको खबरहबसँगको कुराकानीमा भने । ‘सभामुख चयनका विषयमा पार्टीमा भन्दा पनि तीन पक्षबीच समस्या देखियो’ नाम नलेख्ने शर्तमा उनले भने,‘शीतलनिवास, बालुवाटार र खुमलटारको आ–आफ्नै स्वाथ्र्यका कारण समस्या भएको हो ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउन चाहन्छन् भने प्रचण्ड अग्नी सापकोटाको पक्षमा रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई नै सभामुख बनाउन चाहेकी छिन् ।
ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसीसी पास गर्न देखि बैठक सञ्चालन गर्न समेतका लागि नेम्वाङलाई चाहेका छन् । उनी पूर्व माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले जस्तै प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका सापकोटा एमसीसीका विषयमा निर्णयमा पुग्न नसक्ने हुन् कि भन्ने संसय प्रस्तुत गरेका छन् ।
उता पूर्व माओवादी पक्षले भने पार्टी एकता गर्दा प्रधानमन्त्री र पहिलो वरियताको अध्यक्षसमेत गुमाएको भन्दै सभामुख कुनै हालतमा नछोड्न प्रचण्डलाई दवाव दिइरहेको छ ।
नेकपाको सरकारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रभाव पर्ने गरेको नेताहरु स्वीकार गर्छन् । मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा पनि शीतल निवासबाट कोटा खोज्ने गरिएको कतिपयको आरोप छ । नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहँदा नेताहरुलाई बोलाएर छलफल गर्ने लगायतको काममा राष्ट्रपति सक्रिय बन्दा उपसभामुखलाई पनि सभामुख बनाउन उनले लविङ गरेको नेकपाका अर्का एक स्थायी कमिटीका सदस्यको भनाइ छ ।
केही दिन अघि नेता वामदेव गौतमको निवास भैसेपाटीमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेवलगायत बसेर गरिएको छलफलपछि ओली प्रचण्डसँग झस्किएका छन् । पार्टीलाई गतिशिल बनाउन छलफल गरिएको भनिएपनि त्यहाँ आफूविरुद्ध गुटबन्दी गरिएको ओलीको आशंका रहेको छ ।
भैसेपाटीबाट सभामुखमा प्रचण्डलाई साथ दिने आश्वासन पाएको ओलीको बुझाइ रहेको र त्यसकारण पनि सभामुख चयनमा समस्या रहेको पूर्व माओवादी खेमाएका एक नेताले बताए ।
‘बालुवाटारबाट दोहोरो खेल खेलेको देखियो’ पूर्व माओवादी खेमाका एक नेताले भने,‘उपसभामुखलाई राजीनामा गर्न निर्णय पनि गराउने र उनीसँग चाँहि राजीनामा नगर्नुस् भन्ने दोहोरो खेल बालुवाटारबाट भइरहेको छ ।’
उनका अनुसार सभामुख चयनमा बालुवाटार र शीलतनिवासको एक मत रहेको र प्रचण्डलाई गलाएर आफूले भने अनुसारको सभामुख चयन गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
‘पार्टी एकता गर्दादेखिनै पूर्व माओवादीहरु सहमतिमा आउने र गुमाउँदै जाने परिस्थिति बनेको छ, अब त्यस्तो हुने कुरा हुँदैन’ प्रचण्ड निकटका एक नेताले भने ।
पार्टीले निर्णय गर्दा पनि उपसभामुखबाट राजीनामा दिन किन तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिन अस्वीकार गरिन् भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ । नेकपाकै नेताले शीतलनिवासबाट पाएको सद्भावका कारण उनी नेकपाको निर्णयलाई चुनौती दिन पनि पछि नपरेको बताउँछन् ।
कतिपयले पार्टीले समानुपातिक सांसदबाट फिर्ता बोलाएर वा महाभियोग लगाएर भएपनि उपसभामुख हटाउन मिल्ने बताइरहेका छन् ।
‘पार्टीले निर्णय गरेपछि उहाँले नमान्ने कुरा हुँदैन’ नेकपाका स्रोतले भन्यो,‘महाभियोग नै लगाएर हटाउने अवस्था बन्दैन । उहाँ लामो समय राजनीति गरेर आएको व्यक्ति हो । सभामुख बन्न खोज्नु उपसभामुको लागि स्वभाविक कुरा हो ।’
उता उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पनि आफूले कुनै पनि हालतमा पदबाट राजीनामा नदिने बरु संविधान र कानूनको आधारमा आफूलाई हटाउन नेकपा अध्यक्षहरुलाई चुनौती नै दिएकी छिन् ।
‘मैले दुबै अध्यक्षलाई आग्रह गरेको छु । संविधानमा भएको प्रावधानलाई कसैले रोकेर रोकिँदैन’ खबरहबसँग उनले भनिन्,‘तपाईंहरुसँग सजिलो अधिकार संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को ‘ग’ पनि प्रयोग गर्नसक्ने अधिकार छ । ‘ग’ मा उपभामुख र सभामुख रिक्त कसरी हुन्छ भन्ने प्रावधान छ । उपसभामुख पद कसरी रिक्त गराउन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ भनेर भनेको छु ।’
उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पदअनुकूल आचरण नगरेका कारण संसदमा कायम रहेको कूल संख्यामध्ये दुई तिहाई लगाएर हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको बारे अध्यक्षहरुलाई स्मरण गराएको बताइन् ।
‘ मैले उहाँहरुलाई त्यो गर्नुस् भनेर भनिसकेको छु । अर्को संसदको सदस्य नरहेमा भन्ने अर्को प्रावधान पनि छ’ उनले भनिन्,‘ त्यो भनेको समानुपातिकबाट म सांसद बनेको हो । समानुपातिकको लिष्टबाट निकालेर तिमी हाम्रो माननीय हैन भन्न सक्छ । गर्न सक्छ । मैले यो कुरा पनि बताएको छु ।’